I amafilimu lokuqala Soviet uvele ngaphambi 20-30-yalolucwaningo kwekhulu elidlule futhi babeyibo yokuqala yabo futhi emuhle. Siyaye sijabule lapho sikhumbula ubumnandi "Foundling", okuyinto ngakho masterfully kudlalwa Faina Ranevskaya, futhi neminye imisebenzi eminingi yokuqala. Ngamunye wethu movie abawuthandayo of nenkathi yamaSoviet. Abakwazi sibuyekezwe kaningi banganamukeli ngizithola. Ngokungafani imikhiqizo American ezavela 90s, ukukhiqizwa kwanoma amafilimu USSR kwahluka ukujula eside futhi orientation namagugu obuntu. Uhlu lwamabhayisikobho ezinhle Soviet izokwethulwa kulesi sihloko.
Lena indaba enikeza umbukeli okuvelayo omuhle futhi ajabule. Uzungu lokhu: mkhumbi wezimpahla womuntu ehlanganisa amahlosi namabhubesi eholwa hosny Shuleikin. Lonke ithimba kufanele uqaphele ezizingelayo, kodwa isikhonzi noMarianne ubonisa isithakazelo kubo nokunakwa. On the umkhumbi, phezulu konke, kuyinto monkey, okuyinto kungalindelekile ukhululeka amaseli kwezilwane! Abantu aba nesikhathi esinzima, futhi amahlosi ukuhamba ngenkululeko.
Isikhathi sihamba futhi adutshulwa 1961 "indiza omthende" namanje ejabulisa umbukeli, kumenza azizwe izikhathi kube lula, kuyasiza ezicezile ezinkingeni zabo futhi nakho. amafilimu Old Soviet yokuqala emvelweni, futhi indaba eyodwa isithombe akasoze ngomshini nganoma yiluphi uhlobo. Uma uzizwa udangele noma unesizungu, bheka 'indiza ezimthende ", ngeke uzisole!
Ngesikhathi lesi sithombe Beku, impumelelo enkulu futhi isebangeni njengoba indaba yokuqala ngezingane. Kumelwe ngivume ukuthi kuqhathaniswa yesimanje cinema amafilimu uwine engu-80. amafilimu Soviet bayathandeka izigidi ababukeli. Phakathi kukhona abafana ababili - uSergei Syroezhkin kanye electronics owenza UProfesa Gromov. Bazithola ukuhlangabezana futhi lapho ebona ukuthi kuyafana each nye they yanquma ukushintsha izindawo. Lapha kulapho kungena khona kumnandi iqala.
Electronics esetshenziswa ukuba umfundi esilalelayo futhi ekhuthele, futhi Syroezhkin - umfana abavamile ngubani engakwenqeni ngezinye izikhathi bazitike. Ndawonye guys beveza uhambo emangalisayo futhi singene umlando ezithakazelisayo. AbaseSoviet amafilimu zezingane babe munye isici isici - zifundiswa ukuba basheshe ukulalela abanye abantu kanye nemicimbi. Lezi imidwebo kukhona Nasi isibonelo somusa futhi nesimo sengqondo sokukhathalela ezinkingeni labo abasondelene nathi.
"Siphukuto of Fate, noma Jabulela Bath Yakho!"
Kukhona neze umuntu ongakaze wabona le movie enkulu. Abaningi abantu bakithi, ikakhulukazi isizukulwane amadala, lo mkhuba lihlotshaniswa kuphela isikhathi kufike uNyaka Omusha. Festive idili, izipho, imibuthano exokozelayo, imimoya eliphezulu futhi, yebo, "Siphukuto of Fate" ku-TV. amafilimu Old Soviet, ezifana lesi sithombe, ukumphakamisa kwemizwelo, ngcono jikelele impilo engokomzimba ibhalansi ngokomzwelo.
Uzungu Kuyinto ephawulekayo ngempela: bangane abane zilungiselela isikhathi kufike uNyaka Omusha kanye lakudala ka-December 31 wanquma ukuya okugeza. Lapho, bathi isiswebhu umshado zhenya Lukashin futhi ngephutha emthumela Leningrad. Ukuthola yena edolobheni engingalazi, hero awuzange ishaqeke, wahamba 'ekhaya lakhe. " Kube ebonana owesifazane ngubani esikhathini esizayo iyoba Isiphelo sakhe. Kodwa okokuqala, bobabili baye ngokusebenzisa uchungechunge Yimpi bese ngithi goodbye kuya esikhathini esidlule.
Uhlu lwamabhayisikobho ezinhle Soviet kungaba ephelele ngaphandle Kulokhu emangalisa ukuthi sibuyekezwe njalo. Yini kube kuhle uNcibijane ngaphandle "Siphukuto of Fate"?
Classics cinema Soviet. Isithombe esikhanyayo, esimnandi, uletha eziningi imizwelo eyakhayo. Maphakathi - sibalo Anatoly Novoseltseva, okuyinto wasala engasenabo ngenkosikazi nezingane ezimbili ezincane ezingalweni zabo. Wayelethwa ishukunyiswe umngane oseduze enquma hit on ubasi wakhe ukuze ukuthuthukisa isevisi. Umqondisi we Statistical Division - Kalugina ULyudmila Prokofevna - ngisho usola ukuthi ukumnakekela nje ngenxa indawo yawo. Kodwa ngokuhamba heroes uthole bazana, isimo sishintshe kakhulu, ezuza ukujika ngokuphelele ezingalindelekile: Novosel uwela sithandane ngempela ubasi, ezisola indlela okuhloswe ukuba uthole futhi ezothola imali eshisiwe.
Izimo zethu zihluke kakhulu amabhayisikobho emangalisayo futhi ezithakazelisayo of the 80s. amafilimu Soviet igcwele ngobuqotho, isifiso womuntu wonke ukuba ezidingekayo futhi ewusizo. Isici esikhethekile wukuthi umuntu ngesikhathi kubhekwe kuyisibopho kuwo athobele lo myalo ukwenza ngokuhambisana nezidingo yesiqinisekiso umphakathi, kube bethembekile. Buka lezi movie - nemnandi. Abantu abadala ukubukwa injabulo futhi inikeza ithuba ugxumela esidlule, ponostalgirovat.
"EMoscow Akusona Kholwa Nezinyembezi"
Le filimu impendulo enamandla ikakhulukazi kusukela isigamu zesifazane sabantu. Maphakathi indaba indaba Catherine, ngubani, ngokusebenzisa umsebenzi onzima eliwenzile izimpilo imiphumela ezinkulu.
Nanguya intombazane sina, watadisha eziningi futhi awazange alinde isimangaliso. Kwesobunxele ebusheni bakhe kuphela, ngaphandle komyeni nge indodakazi abasha ngezingalo zakhe, wakwazi ukubonisa futhi bazuzise nabanye, bona owesifazana nje nami futhi akuncikile indoda. Ngenxa yalokho, lapho isikhulile ahlangana Ungumuntu omangalisayo - George, oba umngane wakhe yokwethembeka yokuphila.
Uhlu lwamabhayisikobho ezinhle Soviet Yiqiniso, asigcini nje ezintweni eziphathelene izithombe okuthiwa. Kungaba uqhubeke cishe unomphela. Isici esiyinhloko cinema Soviet ukuthi umdwebo ngamunye wadalwa waba umphefumulo ophilayo, ukuze ichitha isikhathi esiningi izinga layo.
Uhlu lwamabhayisikobho ezinhle Soviet lapho inkumbulo wonke umuntu owaphila kwamaSoviet. Labo abamagama intsha kanye nentsha wawela sixties kanye Eighties, manje kokukhathazeka igcina eqoqweni isiqophi yakhe izinhlamvu zakho ozithandayo.
Sergey Lialin: Star Chamber Theatre abaqondisi
"Engenakonakala" (uchungechunge TV): ukubuyekezwa, sakhiwo, abadlali kanye izindima
"Jodhaa Akbar": nabalingisi izinhlamvu emlandweni uthando olukhulu futhi emsulwa
Tippi Hedren - American actress ebanzi ezahlukene abanamakhono oyiculayo uhlamvu izindima
Lokho uxhaso okunjalo futhi iziphi imithombo yayo Lokudabuka
Moon e Leo umuntu: izici, izici, ukuhambisana
Ukuphathwa yikhanda emathempelini namehlo: indlela yokuphatha ekhaya?
Ukubona emphemeni, Kazan incazelo, izici amaqiniso athakazelisayo